यस्तो छ ! पुरुषको तुलनामा महिला र बालबालिकालाई को’रोना भा’इरसको ख’तरा कमहुनुको कारण” – Life Nepali
यस्तो छ ! पुरुषको तुलनामा महिला र बालबालिकालाई को’रोना भा’इरसको ख’तरा कमहुनुको कारण”
काठमाडौँ बीबीसी,। पुरुषको तु’लनामा महिला र बालबालिकामा कोरोना भाइ’रसको ख’तरा कम देखिएको छ । को’रोनाभाइरस सं’क्रमितको मृ’त्यु स’म्बन्धी त’थ्याङ्कमा महिला र बालबालिकाको सं’ख्या पु’रुषको तु’लनामा, नि’कै कम पाइएको हो । ‘चाइनिज सेन्टर्स अफ डि’जिज क’न्ट्रोल’ले गरेको अध्ययनबाट यस्तो,तथ्य प’त्ता लागेको हो । अध्ययनको दा’यरामा’ को’रोना, भा’इरस, सं’क्रमित ४४ हजारलाई, रा’खिएको थियो, जसमा २.८ प्रतिशत पुरुष र १.७ प्रतिशत महिलाको, मृ’त्यु, भएको, थियो ।
उमेरको आ’धारमा वि’श्लेषण गर्ने हो, भने ०.२ प्रतिशत बालबालिका, तथा कि’शोरको, को’रोना सं’क्रमणका का’रण मृ’त्यु भएको, पा’इन्छ । ८० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका १५ प्रतिशत संक्रमितको मृ’त्यु भएको छ । ‘संक्रमणसँग लड्ने शक्ति” – विश्लेषकहरुका, अनुसार म’हिला र बाल-बालिकामा कोरोनाको संक्रमण नै कम हुने या’ उनीहरुको श’रीरले यस भा’इरससँग रा’म्ररी ल’ड्न सक्छ । युनिभर्सिटी’ अफ एक्सटरका डाक्टर’ भरत पनखनिया भन्छन्, ‘साधारणतया कुनै नयाँ भा’इरस दे’खिन्छ भने त्यसबाट जोकोही पनि सं’क्रमित हुन’ सक्छन् ।
यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।’ किनकि नयाँ भाइरससँग ल’ड्नका लागि प्रतिरोधक, क्षमता कसैसँग नहुने, उनको भनाइ छ । कुनै भा’इरस फैलि,न थाल्छ, भने बालबालिका, त्यसबाट कम, संक्रमित हुन्छ’ । यसको का’रण, खु’लाउँदै ‘कि’ङ्ग्स कलेज, लन्डन’का डा’क्टर, नथालिए मेकडरमेट, भन्छन्, ‘बालबालिकामा, सं’क्रमण कम हुनुको, ए’उटा का’रण यो पनि हुन, सक्छ, कि आमा-बुवाले उनीहरुलाई बढी सु’रक्षित रा’ख्छन् ।’
महिलामा सं’क्रमण क’म हुनुको र’हस्य’
को’रोना भा’इरसबाट भएको मृ’त्युको त’थ्याङ्क वि’श्लेषण गर्दा पुरुषको तु’लनामा महिलाको मृ’त्यु निकै’ कम’ भएको पाइन्छ । तर वैज्ञानिकहरुले यसलाई आ’श्चर्य मा’नेका छैनन् । उनीहरुका अनुसार फ्लु’सहित अन्य संक्र’मणमा पनि य’स्तै परिणाम देखिन्छ । महिलामा यस प्रकारका सं’क्रमणको असर कम देखिनुको मु’ख्य का’रण ‘लाइफ स्टाइल’ नै रहेको वै’ज्ञानिकहरु ब’ताउँछन् । पुरुषको तु’लनामा म’हिलाको ‘ला’इफ-स्टाइल’ भिन्न हुन्छ ।
आफ्नो ‘लाइफ-स्टाइल’का का’रण पुरुषको स्वा’स्थ्य महिलाको तुलनामा ख’राब हुने गर्दछ । महिलाको तु’लनामा पुरुषले धु’म्रपान तथा म’दिरापान बढी गर्दछन् । डा’क्टर मे’कडरमेट भन्छन्, ‘धुम्र’पानले मा’निसको फो’क्सोलाई नो’क्सान गर्दछ, यो प’क्कै पनि रा’म्रो कुरा होइन ।’ चीनकै ना’गरिकको लाइफ-स्टाइललाई वि’श्लेषण गर्ने हो’ भने ५२ प्रतिशत पुरुष र तीन प्र’तिशत महि’लाले धु’म्रपान गर्दछन् ।
पुरुष र म’हिलाको प्रतिरक्षा प्रणालीले सं’क्रमणलाई लिएर क’सरी प्र’तिक्रिया ज’नाउँछ, भन्ने कुराले पनि सं’क्रमणबाट हुने मृ’त्युदर निर्धारण गर्दछ । ‘युनिभर्सिटी अफ इस्ट ए’ङ्गलिया’का प्रोफेसर पल ह’न्टर भन्छन्, ‘महि’लाहरुमा आ’न्तरिक रुपमा पु’रुषको भन्दा’ भिन्न प्र’तिरक्षा प्रति’क्रिया हुन्छ ।’ उनका अनुसार फ्लु’का स’म्बन्धमा पनि महिलाले प्रभावकारी ‘एन्टिबडी’ उत्पादन गर्दछन् ।
गर्भा’वस्थामा कति ख’तरा ?
आधिकारिक रुपमा यसको ज’वाफ नआए पनि ग’र्भावस्थामा सं’क्रमणको खत’राबारे स’न्देह नै छ । ग’र्भावस्थामा श’रीरमा धेरै परिवर्तन हुन्छ । यस क्रममा श’रीरको प्रति’रक्षा प्र’णाली क’मजोर हु’न्छ’, जसका का’रण श’रीरले ग’र्भाश’यमा भ्रु’णलाई स्वी’कार ग’र्दछ । परि’णाम स्वरुप ग’र्भवती म’हिलामा सं’क्रमणको ख’तरा बढी’ हुन्छ । स’मान उमेरका अन्य महिलाको तुलनामा ग’र्भवती महि’लामा फ्लु लगायतका संक्र’मणका का’रण मृ’त्यु हुने ‘ख’तरा’ बढी रहने वै’ज्ञानिकहरुको भ’नाइ छ ।
तर बेलायत सरकारले भने ग’र्भवती म’हिलालाई कोरोना-भाइरसले ग’म्भीर रु’पमा प्र’भावित गरेको कु’नै प्र’ष्ट संकेत नभेटिएको दा’वी गरेको छ । प्रो’फेसर ह’न्टर भन्छन्, ‘मलाई भने यसमा पूर्ण वि’श्वास छैन, केवल नौ ग’र्भवती महिलामा गरिएको परी’क्षणबाट नि’कालिएको त’थ्यांकलाई आ’धार मा’नेर, नि’ष्कर्ष नि’काल्नु राम्रो होइन ।’
बालबा’लिकामा को’रोनाको प्र’भाव
बालबालिकामा पनि को’रोना सं’क्रमण हुन सक्छ । हालसम्मको अ’वस्थालाई हेर्ने हो’ भने को’रोना-भा’इरसबाट एक दिन उमेरको ब’च्चा पनि सं’क्रमित, भएको पाइएको छ । सानो उमेरका बालबालिकामा, पनि’ यसको ख’तरा, देखिएको छ । खासगरी’ दुई वर्षभन्दा’ कम, उमेरका बालबालिकामा’ सं’क्रमणको ख’तरा देखिएको’ विश्लेषकहरु बताउँछन् । डाक्टर पनखनिया’ भन्छ’न्, ‘मानिस उमेर बढेसँगै बढी, बि’रामी, हुँ’दै, जा’न्छन्, किनकि, उनीहरुको प्रति’रो’धात्मक क्षमता कम हुँदै जान्छ ।’ बा’लबालि’कामा भने यो भा’इरसको असर ह’लुका नै पा’इएको उनको भनाइ छ ।
एउटा ब’च्चा, र वयस्कको प्रतिरक्षा, प्र’णालीमा नि’कै’ अन्तर हुने वैज्ञा’निकहरुको भ’नाइ छ । बा’ल्यका’लमा श’रीरको प्रतिरक्षा ‘प्रणा’ली अपरिपक्व हुने, भ’एकाले त्यसले अति प्रति’क्रिया, ज’नाउन सक्छ । जसले गर्दा बाल’बालिकामा, ज्व’रो, रुघा–खो’की ज’स्ता स’मस्या सा’मान्य, मानिन्छ । प्रतिरक्षा प्र’णाली अति स’क्रिय हुनु, पनि राम्रो होइन । किनकि, यसले शरीरको, बाँकी हि’स्सालाई नो’क्सान गर्न सक्छ । य’द्यपि बा’लबालिकामा को’रोनाको अ’सर किन, कम भ’यो त ? डाक्टर मे’कडरमेट भन्छन्, ‘यो भा’इरसले बा’लबालिकाको, प्र’तिरक्षा प्र’णाली उ’त्तेजित, नगर्ने गरी प’क्कै, पनि केही काम, गरेको’ हुनुपर्छ, तर त्यो के हो, र कसरी, भयो भन्ने प्रष्ट, भइसकेको’ छैन ।’ -बीबीसी
Previous कोरोना ९२ देशमा फैलियो ! भा’इरसका का’रण ४ लाख ८० हजार अमेरिकीको नि’धन हुने आँकलन सार्वजनिक
Next ३० बर्ष पुरानो ग्या’स्टिक पनि तु’रुन्तै निको पार्ने यो ,घरेलु ओेैषधी” हेर्नुस् भिडियो”